Liin dhanaan leh ulaha baradhada macaan iyo broccoli | Cunnooyinka jikada
Lemon Salmon leh Ulaha baradhada macaan iyo Broccoli
Maria vazquez | 23/05/2021 10:00 | Cunnooyinka Kalluunka
Guriga waxaan jecel nahay suxuunta combo. Waxaan badiyaa diyaarsano mid ka mid ah casho, annaga oo isku daraynayna maaddooyin aan u diyaarinay munaasabaddaas kuwa kale oo ka haray diyaargarowgii hore. Beddelka weyn ee looga tago qaboojiyaha eber, maadaama aan uga tagno liin dhanaankan leh ul baradho macaan iyo broccoli.
Diyaarinta saxankan isku dhafan kuma lug laha wax dhibaato ah. Waxa aad waqti badan ku qaadan doonto ayaa ah diyaarinta ulaha baradhada macaan la dubay; In kasta oo si fiican loo jarjaray oo si khafiif ah loogu duubay saliid, ma qaataan wax ka badan 15 daqiiqo inay sameeyaan. Is waafajin ku habboon kuwa jecel maaddadan.
Sida loo yaqaan 'salmon', waxaa loo sameeyaa geedka ama digsiga laakiin saliid la'aan iyo in yar liin si ay u keenaan freshness. Markaas waxaan kuu sheegayaa sida. Markaad karisid, waxbadan ayaa kuu dhiman inaad qabato sidaan hoosta kuugu sheego. Diyaar ma u tahay inaad karsato saxankan salmon-ka ah?
Saxankan isku-darka ah ee salmon oo leh baradho macaan iyo ulaha broccoli ayaa ah bedel casho kaamil ah. Tijaabi!
Nooca cuntada: Kalluunka
Waqtiga diyaarinta: 10 m
Wadarta waqtiga: 30 m
2 jeex weyn oo salmon ah
1 baradho macaan
Saliid dahab ah oo bikrad ah
Cusbo iyo basbaas
½ qaado yar oo ah paprika macaan
4 xabbo oo liin ah
1 qaado oo soos ah soy
Waxaan ku bilaabaynaa xoqida baradhada macaan iyo jarista ulaha. Kuwaan waxaan dul saarnaa saxaaradda foornada, oo lagu dhajiyay warqad soo-xaarid ah.
Isku qas laba qaado oo saliid saytuun ah, paprika, milix iyo basbaas si aad ugu dhadhamiso koob yar. Iyada oo burushka jikada cadayo ulaha isku dar ah kahor intaadan foornada gelin.
Kari 180ºC ilaa 15 daqiiqo ama illaa iyo.
Halka, aan karino broccoli muddo afar daqiiqo ah. Ka dib, wax yar ayaan qaboojineynaa, daadinta iyo keydinta.
Marka aan diyaarino baradhada macaan iyo broccoli, waxaan diyaarinaa salmon. Cusbo iyo basbaas labadaba xaleef oo ku rid digsi kulul oo aan ku faafin doonno qanjaruuf saliid ah.
Waxaan karnaa 3 daqiiqo ka dibna waan rogeynaa. Daqiiqad aan ka faa'iideysaneyno kudar 4 liin xaleef ah. Karso dhinaca kale illaa aad ka dhamayso ka dibna ku adeeg saxan oo ay ku jiraan ulaha baradhada macaan.
In la dhammeeyo, haddii aan rabno, waxaan ku dhaafi karnaa broccoli digsiga, isagoo ku daraya maraqa soyka. Suté dhowr daqiiqo oo u adeegso liinta salmon leh ulaha baradhada macaan iyo broccoli.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Kalluunka » Lemon Salmon leh Ulaha baradhada macaan iyo Broccoli
Napolitans shukulaato yar
Keega boorashka leh tufaax iyo sabiib